Ogaden News Agency (ONA) – Shir balaadhan oo loo qabtay Somalida dagan Nairobi loogu sharxayo qadiyadda S.Ogadenya
Shir balaadhan oo loo qabtay Somalida dagan Nairobi loogu sharxayo qadiyadda S.Ogadenya
Jaaliyada S.Ogaadeeniya ee Kenya ayaa Shirweyne u qabatay Soomaalida ku nool Xaafada Islii ee Nayrobi. Shirweyanaha oo ay ka soo qayeb galeen boqolaal dadweyanaha Somaliyeed ah iyo mas’uuliiyn ka tirsan dhalinyarada iyo Jaaliyadaha Soomaaliyeed ee dagan xaafada Islii ayaa si wayna looga dareemay xaafadaha ay Soomaalda ka dagantahay Nairobi.
Shirweynaha ayaa waxaa khudabado kala duwan ka soo jeediyey shirka amsuuliyiin ka tirsan jaaliyadda Ogadenya iyagoo ka warbixiyey marxaladihii siyaasadeed ee waddanka Ogaadeeniya uu soo maray iyo waliba dagaalka mudada dheer ka socoday dalka Ogadenya. Waxay mas’uuliyintu si fiican ooga hadaleen taariikhada Halganka gobanimo doon ee ONLF ay hogaaminayso marxaladdan iyo halganadii ka horeeyayba.
Arimaha sida aadka ah looga hadlay oo dadweynihii yimid ay sida aadka ah u xiisaynayeen ayaa waxaa ka mid ahaa shirkii wadahadalka ee u dhexeeyay jabhadda ONLF iyo dawladda Itobiya ee ku fashilmay Nairobi. Masuuliyiinta ayaa dadweynaha u sheegay inay Itobiya doonaysay inay ONLF ka saxiixdo heshiis beenaad la mid ah kuwii ay ka saxiixday Ibraahim dheere iyo kooxdiisa.
Warbixinada ay masuuliyinta ka hadleen oo dhinacayo badan taabanayey ayaa waxaa dadka aad u u soo jiitay warbixin maqal iyo muuqaal aha oo uu soo jeediyey Dr Maxamuud Ugaas oo uu kaga warbixineysay khayraadka dhulka Soomaalida Ogaadeeniya. Dr Maxamuu Ugaas ayaa waxaa ka mid ahaa hadaladiisa; “Dhulka Ogaadeeniya waxay damacday Itobiya in ay aduunka ka dhaadhiciso in uu yahay lama dagaan ay nololsha ku yartahay, waxaase taas beeneeyey cilmi baadhis la sameeyey xiliyo kala duwan lana ururiyey waxaan lagu ogaaday in sababta gumaysiga ku soo jeedisay dhulka Ogaadeeniya ay tahay hodantinimada dhulka Ogaadeeniya iyadoo Itoobiyan ay dooneyso khayraadkaas.”
Wariyaha ONA ayey gabogabadii shirka qaar ka tirsan dadweynihii shirka ka qayeb galay u sheegeen in ay wax badan ka fahmeen taariikhda dhulka S.Ogaadeeniya ayna jecelaan lahaayeen in ay ka qayeb galaan shirar noocan oo kale ah oo qadiyada Ogaadeeniya iyo taariikhada halganka Gobanimo doonka aha lagaga hadalayo.
Barnaamjikana oo maqal iyo muuqaal aha Kala Socoda Ilays.